Dancing Cubes Rakibaadda Mawduuc - Joornaalka Naqshadeynta
Rakibaadda Mawduuc Naqshadani waxay la falgalaysaa mowduuca la soo bandhigay oo ku saabsan cutubyada. Mowduucani mawduuca waxaa loogu talagalay qaab is-ballaarineed si loogu xiro lix ama in ka badan dhudhun unugyo kor u kaca ah oo saddex ah jihooyinka isku midka ah. Qaab-dhismeedka foomka bilaashka ah oo leh xargaha ayaa ka dhigaya xiriirku mid lamid ah dadka qoob-ka-ciyaarka ah ee isdhaafsan. Abaabulka godadka yar yar waxay abuurayaan qaab dhismeedka hoy loogu talagalay maaddada leh qaybo toosan.
Magaca mashruuca : Dancing Cubes, Magaca naqshadeeyayaasha : Naai-Jung Shih, Magaca macmiilka : Naai-Jung Shih.
Rakibaadda Mawduuc Naai-Jung Shih Dancing Cubes